ပူတင်က ဆီးရီးယားအတွက် အဓိကပြဿနာမှာ ခွင့်ပြုချက်မဲ့ နိုင်ငံခြားတပ်များ ဝင်ရောက် တပ်စွဲထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ဆို - Xinhua News Agency
မော်စကို ၊စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသရှိ ဆီးရီးယားနိုင်ငံအနေဖြင့် အဓိကကြုံတွေ့နေရသော ပြဿနာမှာ ယင်းနိုင်ငံအစိတ်အပိုင်းအချို့တွင် နိုင်ငံခြားတပ်များ ခွင့်ပြုချက်မဲ့ ဝင်ရောက် တပ်စွဲထားခြင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်ကြောင်း ရုရှားနိုင်ငံသို့ အလည်အပတ်ရောက်ရှိနေသော ဆီးရီးယားနိုင်ငံသမ္မတအာဆက်အား ကရင်မလင်နန်းတော်၌ စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်တွင် လက်ခံတွေ့ဆုံစဉ် ရုရှားနိုင်ငံသမ္မတဗလာတီမာပူတင်က ပြောကြားလိုက်သည်။ထိုသို့ ၎င်းတို့တပ်စွဲထားမှုကို ကုလသမဂ္ဂက ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိကြောင်း သို့မဟုတ် ဆီးရီးယားခေါင်းဆောင်မှုသည် နိုင်ငံတကာဥပဒေကို ခြားနားဆန့်ကျင်ရာရောက်ကြောင်း ၊ နိုင်ငံတွင် စည်းလုံးညီညွတ်မှုတည်ဆောက်ရန် ကြိုးပမ်းမှုအား နှေးကွေးရပ်တံ့စေကြောင်း နှင့် စစ်ပွဲအလွန် ကာလ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကို တုံးဆိုင်းနှေးကွေး စေကြောင်း မော်စကိုမြို့၌ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်က ဆီးရီးယားသမ္မတအာဆက်နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ် ပူတင်က ဆိုသည်။
ဆီးရီးယားနိုင်ငံအတွင်းရှိ အင်အားစုများ အားလုံး စည်းလုံးညီညွတ်မှုတစ်ခုတည်းကသာ နိုင်ငံအား ရှေ့ဆက်သွားရန် ခွင့်ပြုပေးနိုင်မည်ဖြစ်ရာ နိုင်ငံရေးအတိုက်အခံများနှင့်အတူ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး တည်ဆောက်ရန် အာဆက်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ် မျှော်လင့်ချက်ရှိကြောင်း ပူတင်က ဆိုသည်။
အလွန်အရေးပါပြီး အဓိကကျသည့် လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သော အကြမ်းဖက်မှုများတိုက်ဖျက်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် နိုင်ငံ၏အချုပ်အခြာပိုင်နက် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းအား ထိန်းချုပ်ထားရန် ဆီးရီးယားအစိုးရအား ခွင့်ပြုပေးခဲ့ခြင်း စသည့် ရုရှား-ဆီးရီးယား ပူးတွဲအားထုတ်မှုများအပေါ် ပူတင်က ချီးကျူးစကားဆိုခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ပူတင်က ယခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက်အတွင်း ကုန်သွယ်မှုပမာဏ ၃.၅ ဆ အထိ တိုးတက်ခဲ့သည့် နှစ်နိုင်ငံအကြား ကုန်သွယ်ရေး နှင့် စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြင့်မားစွာ တိုးတက်လာခြင်းကိုလည်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အစည်းအဝေးအတွင်း သမ္မတအာဆက်က နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ဆီးရီးယားနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအား ဟန့်တားနှောင့်ယှက်နေခြင်းအတွက် “အချို့သောနိုင်ငံများအား” ဝေဖန်လိုက်ပြီး ၊ ပြည်ပဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများသည် လူသား-ဆန့်ကျင်မှု နှင့် ဥပဒေအရ တရားဝင်မှုမရှိကြောင်း ပြစ်တင်ပြောကြားလိုက်သည်။
COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများထောက်ပံ့ပေးခြင်း နှင့် နိုင်ငံတကာဥပဒေများ၏ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများအား ခုခံကာကွယ်ပေးခဲ့ခြင်း အပါအဝင် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီများပံ့ပိုးပေးခဲ့သည့်အတွက် ရုရှားနိုင်ငံအား ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း အာဆက်က ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။(Xinhua)
ontradicts international law, and has impeded efforts to consolidate the country and slowed down post-war restoration, Putin said Monday duringameeting with Assad in Moscow.
Russian President Vladimir Putin meets Syrian President Bashar al-Assad in the Kremlin, Moscow, on Sept. 13, 2021. (Kremlin press release)